Ngaba siya kuba nedatha ethe kratya kwiApple Park ngoJuni 5? | Ndisuka mac
Siphetha usuku ngombuzo ngokuqinisekileyo uninzi lwenu esele lubuziwe. Ngaba iApple iya kunika idatha entsha yento ephekwayo eApple Park? Ngaba siza kuba nomhla wokuvula osemthethweni weApple Park? Ngaba baya kubonisa imiba yokusebenza kwabo kunye nezinto zangaphakathi kwi-Keynote elandelayo?
Yonke le mibuzo isemoyeni kwaye iyimibuzo njengokuba iWWDC 2017 isondela, iya ibaluleke ngakumbi. Enye yezinto esiqiniseke ngayo kukuba iApple iyawukhawulezisa umsebenzi eApple Park ukuze umboniso wesikhumbuzo seminyaka eli-XNUMX ye-iPhone ube kwindawo apho othandekayo wethu uSteve Jobs walwela kakhulu.
I-Apple Park sele ifikelela esiphelweni ngokwendlela yokwakha kwaye ke sele sizibuza ukuba iza kuba nini ukuvulwa kwayo. Ukusungulwa okuza kusasazwa kwimimoya emine kwaye uninzi lwethu luqinisekile kuyo Siza kumangaliswa kukubona iziko lemithambo-luvo i-Apple eyakha iminyaka embalwa.
Ngaphandle kwamathandabuzo iyakuba sisakhiwo esiya kuphawula ngaphambi nasemva kuhlobo lwesakhiwo esakhiwayo ziinkampani ezinkulu ukwakha ikomkhulu labo kwaye iApple ithe kwizihlandlo ezininzi ukuba iya kuba sesona sakhiwo siluhlaza kwaye sisebenza ngokuseMhlabeni. Ewe, ubuyela kumbuzo okwisihloko seli nqaku ...Ngaba ucinga ukuba nge-5 kaJuni bazakusisa ngolwazi oluthe kratya malunga nesi sigebenga, iApple Park?
Ndicinga njalo, ukuba uTim Cook kunye neqela lakhe bazakuthatha inqanaba lokuvula kwe-Keynote yeWWDC 2017 kwaye bazakusinika amazinyo amade xa kufikwa kwiApple Park. Idatha yokuqala yathetha nge- ukuvula ngo-epreli, kodwa sonke silinde ukuvulwa okwenziwe kwi-Keynote, esikholelwa ukuba ayizukulinda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ngaba siya kuba nedatha ethe kratya kwiApple Park ngoJuni 5?